अनुजाको 'पिपली लाइभ' संस्करण | दुनियाँ
पैसा पाउनेले झोलै नहेरी घर लगेको र भोलिपल्टमात्र हेरेको बताएकी छिन्। पोको लिएर जान सक्नेले भोलिपल्टसम्म नहेरी बस्न सक्छ ? कौतुहलता रोक्ने क्षमता उनमा कसरी विकास भयो ? के उनी कुनै असाधारण मान्छे हुन ? अनि उनले आफूले फोन नं. पत्ता लगाएर त्यो पैसा हराउनेवालालाई बोलाएको अनि सलले छोपेर लगेर बजारमा दिएको बताएकी छिन्। के पैसामा सम्पत्तिवालाको फोन नं. पनि हुन्छ ? पैसा भएको झोलामा डायरी हुन्छ नै भन्ने छ ? डायरी भए पनि त्यसमा सम्पर्क नम्बर हुन्छ नै भन्ने के छ ? त्यसैले 'काकापट्टिको न मामापट्टिको' मान्छे, ज‍ो हुलियाविनाको छ, उसको नम्बर पत्ता लगाइवरी पाएको ठूलो सम्पत्ति फिर्ता दिने कुरा 'एकादेश' मा मात्र सम्भव हुन्छ।
यो दुनियाँमा को त्यस्तो व्यक्ति छ, जसले इनामवापत दिइएको रकमसमेत लिन मान्दैन ? त्यसमाथि पनि दुई दुई लाख ! साधु सन्तले समेत र्‍याल चुहाउने र महादेवका समेत तीन नेत्रका रुपमा परिचित 'धन', त्यसमाथि धेरै नेपालीको सपना 'हिराको हार' नरुचाउने व्यक्ति साधारण हुनै सक्दैन। अनि ती पौडैल/पोखरेल कति भलाद्‍मी रहेछन्, जो त्यत्रो पैसा हराउँदा पनि प्रहरीमा उजुरीसमेत गर्न गएनन्। लुसुक्क घर फर्के। जसलाई देखेर प्रहरीसमेत छक्कै परेको छ।
यस्तो अवस्थामा सत्य-तथ्यविना कसैले ठट्टा गरिदिएकै भरमा समाचार बनाउने सञ्चार माध्यमले समाचारका सामान्य सिद्धान्तसमेत पालना गरेको देखिन्न। पैसा पाएको भन्नेले त्यो किन प्रहरीलाई खबर नगरेर घर लगेको ? उनले ब्याग पाएको भनिएको दिन इटहरीको आइएमइ शाखाबाट त्यत्रो रकम भुक्तानी भएको थियो वा थिएन ? जस्ता प्रश्नको उत्तर, जुन सामान्य समाचारका लागिसमेत आवश्यक हुन्छ, यसतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न। अर्कोतर्फ हराएको त्यत्रो पैसा पाउने 'भाग्यमानी' को प्रतिक्रिया पनि आवश्यक ठानिएन।
खबरवालाले त खबर दिए दिए। मुलुककै प्रमुखको बागडोर सम्हालेर बसेका राष्ट्रपतिले किन यति हतारमै उनलाई फोन गरिगरी धन्यवाद दिनुपर‍्‍यो भन्ने रहस्य पनि बुझ्न सकिएको छैन। यसले एकातिर राष्ट्रपतिको फुर्सदिला दिन प्रष्ट्याउँछ भने अर्कोतर्फ उनलाई कस्ता हल्काफुल्का विषयवस्तुले आकर्षित गर्दोरहेछ भन्ने रहस्य पनि खुलेको छ। हुँदाहुँदा प्रधान न्यायाधीशमात्र हैन, मुलुककै 'ठूला लेखक', 'समाजसेवी', 'अर्थविद्' आदिसमेत अनुजाको गुणगान गाउनमा हतारिए। यथेष्ठ तथ्य र प्रमाणहरु जुटाएर त्यसैका आधारमा मात्र बोल्ने आदत परेका न्यायमूर्तिसमेत यसरी हतारमा प्रतिक्रियाका लागि लालायित हुन्छन् भने अरुलाई के नै भन्ने ?
अनुजा बानियाँ त चर्चामा आइन् यो घटनाले, उनलाई फाइदै भो। के उसै त विभिन्न आरोप खेपिरहेको नेपाली सञ्चार माध्यमलाई पनि यो 'अनुजाको पिपली लाइभ संस्करण' ले फाइदै देला त ?
श्रोत :रघु लामीछाने http://nagariknews.com/nagarik-blog/85-blog/25702-2011-04-22-08-15-12.html
थप समाचारको लागि http://nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/25740-2011-04-23-06-07-23.html क्लिक गर्नुहोला ।